နီနီခင်ဇော် - အနီရောင် [2015 Album] [Feat.Wai La & Lil Z] 256Kbps! [Released - July 19] ( Update Download Link ! ) - Mg Shan Lay
Home Album Lil Z Wai La နီနီခင်ဇော် ဝေလ နီနီခင်ဇော် - အနီရောင် [2015 Album] [Feat.Wai La & Lil Z] 256Kbps! [Released - July 19] ( Update Download Link ! )
နီနီခင်ဇော် - အနီရောင် [2015 Album] [Feat.Wai La & Lil Z] 256Kbps! [Released - July 19] ( Update Download Link ! )
9:43:00 AM Album, Lil Z, Wai La, နီနီခင်ဇော်, ဝေလ,
နီနီခင်ဇော် - အနီရောင် [2015 Album] [Feat.Wai La & Lil Z] 256Kbps! [Released - July 19]
Tags # Album # Lil Z # Wai La # နီနီခင်ဇော် # ဝေလ
Labels: Album, Lil Z, Wai La, နီနီခင်ဇော်, ဝေလ
Eric Xing July 23, 2015 at 5:45 PM
Eric Xing July 23, 2015 at 5:46 PM
lin lin July 24, 2015 at 10:58 AM
Error ပြနေတယ် ဆရာ လင့် ပြင်းပေးပါအုံး
Shan Lay July 25, 2015 at 10:14 AM
Link မချိတ်ထားပါ . . . Facebook Page မှာလာတောင်းပါ . . .
ko aung November 23, 2015 at 11:15 PM
Album တစ်ခုလုံးစာ zip ဖိုင်ကို download link ထည့်ပေးထားရင် အရမ်းပိုကောင်းသွားမယ်အစ်ကို... ကျေးဇူးပါခင်ဗျ